Salaamanews » Salaamanews oo bilowday barnaamij cusub oo ku saabsan suugaanta iyo barashada Soomaaliga (Dhageyso qeybta koobaad)
Home » Suugaan, Warar Salaamanews oo bilowday barnaamij cusub oo ku saabsan suugaanta iyo barashada Soomaaliga (Dhageyso qeybta koobaad) Print - Daabace: SalaamaNews - Jan 23rd, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Sawirro: Muqdisho oo laga furay tababar siminnaar saxaafadeedPuntland oo mamnuucday 3 xarun raadiye oo ka shaqeeya arrimaha bini’aadannimadaSawirro: Maamulka Puntland oo yeeshay raadiye afkiisa ku hadla, kaddib xarigii dhowr xarun warbaahineedXukuumadda Soomaaliya oo ballan qaaday xeer ilaalin doona Saxaafadda SoomaaliyaAbwaan Gaariye oo xalay geeriyooday
(Salaamanews) —Akhristeyaal! Salaamanews, waxaa ay muddo dheer ku taamaysay, kana baaraan-dageysay in ay qeybaheeda baahinta suugaanta ku darto qeyb maqal, muuqaal iyo qoraalba leh oo lagu xoojinayo, islamarkaana lagu soo noolaynayo Afkeena Soomaaliga, oo ka mid noqday waxyaabihii uu dhaawaca culus soo gaarsiiyey dhibatadii iyo qaran burburkii dalka ka dhacay. Iyadoona qeybtaan aan si gaar ah ugu dhiiragalinayno dhalinta iyo Soomaalida waayahaasi foosha xumaa dalka ka firxaday ee galay dhulal shisheeye, islamar ahaantaasna daris iyo deegaanba la noqday dad aysan dhaqan iyo aftoona wadaagin.
Muunadda reedyowga, waa barnaamij cod ah oo horu-dhac u ah qeybtaan baahineed ee sida gaar ah u khusaysa barashada iyo xoojinta Af-Soomaaliga-Waxaana barnaamijkaan oo noqon doona mid taxane ah oo todobaad waliba aad halkaan kala socon doontaan soo diyaariyey, idin lana socod-siin-doona Cabdirashiid Maxamed Xaashi “Duqa”, oo ka mid ah wariyeyaasha Soomaaliyeed, kana mid ah bahda Salaamanews. Waxaana Cabdirashiid uu barnaamijkaan Muunadda reedyowga, oo yeelan doona nuucyo iyo qeybo kala duwan uu todobaad waliba idin ku jalbeebin doonaa sheeko iyo sheekooyin xiiso leh oo noqon doonta mid uun:-“Suugaan ama barasho Af-Soomaali”…Iyadoona ay ku jiri-doonaan codad dad kala duwan, sida abwaaniin, wariyeyaal iyo dad taarikhda aruuriya…Sidoo kale waxaa ku jiri-doona heeso.
Wariye Cabdirashiid Maxamed Xaashi ‘Duqa” [Sawirka/keyd)Qeybtiisa ugu horreysa ee aan todobaadkaan idin maqashiin doono, waxaa ay ku saabsan tahay ciyaaraha ay Soomaalidu hidaha iyo dhaqanka sida gaarka ah ugu leedahay, sida dhaantada iyo kuwo la hal-maala. Iyadoo qeybta dambe ee isla xubintaanna aad ku maqli-doontaan xubin joogto iyaduna noqon-doonta oo la yiraahdo qaamuuska ka baro afkaaga. Hadaba dhageysi wanaagsan barnaamijka Muunadda reedyowga iyo Cabdirashiid Duqa, uusanna idin seegin qeybiisa kale oo xiiso gaar ah xambaarsanaan doona, islamarkaana todobaad waliba taxane ka noqon doona qeybta suugaanta ee Salaamanews, hadduu eebe suuragaliyo.
“Wixii talo iyo tusaale ah inoogu soo dir ciwaanka hoos ku qoran. Sidoo kalana haddii aad doonaysid in aad fikirkaaga barnaamijkan ku saabsan la wadaagtid akhristeyaasha kale hoos ku qor, inaguna waan soo baahin doonaa.”
Tags: suugaan, warar « Qoraalkii HoreHalkaan ka daawo wareysiyo uu madaxweynaha Soomaaliya bixiyey intuu uu Mareykanka ku sugnaa	Qoraalka Xiga »Boka Xaraam oo kordhisay weerarrada ay ka wado Nigeria	Halkan Hoose ku Jawaab